Mahila Swasthya कम समयमा पार्टी मेकअप यसरी गर्नुस् !
कम समयमा पार्टी मेकअप यसरी गर्नुस् !
मंगलबार, वैशाख १४, २०७८ महिला स्वास्थ्य
काठमाडौं - चाहे चार्डपवको समयमा होस् अथवा कुनै पार्टीको समयमा होस् महिलाहरु छोटो समयमा छिटोछिटो तयार हुन खोज्छन् । जसका कारण उनीहरु राम्री देखिनुको साटो नराम्रो पनि देखिन सक्छन् । कतिपय बेला भने मेकअपमा धेरै समय लगाएको भनेर पनि कुरा हुन्छ ।
मेकअप गर्दा सबैभन्दा पहिला प्राइमर लागाउनुहोस् जसले गर्दा तपाईको मेकअप लामो समयसम्म रहन मदत गर्छ ।
प्राइमर लगाइसकेपछि निधार, नाक, चिउडो र गालामा फाउन्डेसन लगाएर राम्रोसँग औँलाले ब्लेन्ड गनुहोस् । औँलाले ब्लेन्ड गरिसकेपछि हल्का चिसो स्पोन्जले अझै राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुपर्छ ।
राम्रो सँग फाउन्डेसन लगाइसकेपछि मुखमा भएको दागहरु छोप्नका लागि आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार कन्सिलर लगाउनुहोस् । सानो ब्रस वा स्पोन्जको मदतले मुखको सबै भागमा लगाउनुहोस् अझ बढी नाकको आसपास, आँखाको मुनी, ओठको छेउमा कन्सिलरको प्रयोग गनुपर्छ । जस्ले गर्दा मुखको सबै दाग छोपिन्छ ।
मुखको अन्य भाग जस्तै आँखालाई पनि सुन्दर राख्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आँखाको वरपर कन्सिलर वा फाउन्डेसन सेट गर्नका लागि ब्रसको माध्यमले गाढा हुने गरी लगाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र आफ्नो कपडासँग मिल्ने रंगको आईस्याडो, गाजल लागाउनुहोस् । र आफूलाई चाहिएको खण्डमा नक्कली परेला पनि लगाउन सक्न् हुन्छ ।
अन्त्यमा लिबिस्टक लगाउनुहोस् र आफूलाई सुन्दर बनाउनुहोस् । यसरी नै छोटो समयमा सुन्दर बन्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १४, २०७८
वर्षाका लागि मेकअपका केही टिप्स
मेकअप बिनानै यसरी सुन्दर र आकर्षक बन्नुहोस्
मसल्स बनाउन यी चिज खानुस्
देशभर ६ हजार १३५ जना संक्रमणमुक्त भए ३ मिनेट पहिले